Iimvavanyo zeQela ziQulunqa izakhono ze-21 zamaKhondo
I-Whys ne-How-tos yokuBhala kweQela kuzo zonke iiNdawo zoLwazi
Ukusebenzisa iNkqubo yokuBhala yoNxibelelwano kunye nokuBambisana
Ootitshala naluphi na uqeqesho kufuneka bacinge ngokunika isabelo esibhaliweyo sokubhaliweyo, njengengcaciso yeqela okanye iphepha. Nazi izizathu ezintathu ezifanelekileyo zokucwangcisa ukusebenzisa isabelo sokubambisana kunye nabafundi kumabanga 7-12.
Isizathu # 1: Ukulungiselela abafundi ukuba bakulungele iikholeji kunye nekhondo, kubalulekile ukubonelela kwinkqubo yokusebenzisana. Ubuchule bokubambisana kunye noqhagamshelwano lunye lwezakhono ze-21 Century ezifakwe kwimigangatho yemigangatho yemfundo.
Ukubhalwa kwehlabathi langempela kudla ngokugqitywa ngendlela yo kubhala kweqela-iprojekti yeprojekthi yeklasi yekholejini, ingxelo yoshishino, okanye i-newsletter yeziko elingenzi nzuzo. Ukubhala ngokubambisana kunokubangela iingcamango ezingaphezulu okanye izisombululo zokugqiba umsebenzi.
Isizathu # 2: Ukubhala ngokubambisana kubangela kwimveliso embalwa ukuba utitshala ahlole. Ukuba kukho abafundi abangama-30 eklasini, kwaye utitshala uququzelela amaqela okubhala abambisana nabafundi abathathu ngamnye, umphumo wokugqibela uza kuba ngamaphepha alandelayo okanye amaprogram ukuya kubanga ngokuchasene namaphepha angama-30 okanye iiprojekthi eziza kubakala.
Isizathu # 3: Uphando uxhasa ukubhala ngokubambisana. Ngokomxholo kaVigostsky we-ZPD (indawo yokuphuhliswa kokukhawuleza), xa abafundi besebenza nabanye, kukho ithuba lokuba bonke abafundi basebenze kwinqanaba elingaphantsi kwesakhono sabo esiqhelekileyo, njengoko kubambisana nabanye abakwaziyo okuncinci kunokunyusa mpu melelo.
Inkqubo yokuBambisana yokuBambisana
Umehluko ocacileyo phakathi komsebenzi wokubhala ngamnye kunye nesabelo sokubambisana okanye sokubamba iqela ekunikezeni uxanduva: ngubani obhalayo?
Ngokwe-P21's Framework for 21 Century Learning, iingxoxo ezibandakanya ukubhala ngokubambisana nazo ziqhuba izakhono ezingama - 21 zokukhulumisana ngokucacileyo ukuba zinikwa ithuba loku:
Ukucacisa iingcinga kunye neengcamango ngokufanelekileyo ngokusebenzisa izakhono zomnxibelelwano ngomlomo, ezibhaliweyo nezingabonakaliyo kwiintlobo ezahlukeneyo kunye neemeko
Mamela ngempumelelo ukuchaza intsingiselo, kuquka ulwazi, ixabiso, izimo zengqondo kunye neenjongo
Sebenzisa ukuxubusha ngeenjongo (umzekelo, ukuzisa, ukufundisa, ukukhuthaza nokukhuthaza)
Sebenzisa amajelo eendaba kunye nobuchwepheshe, kwaye uyazi indlela yokugweba ukuphumelela kwabo ngokubaluleka kunye nokuvavanya impembelelo yabo
Ukuthetha ngokufanelekileyo kwimimandla eyahlukeneyo (kuquka iilwimi ezininzi)
Uluhlu olulandelayo luya kunceda ootitshala kunye nabafundi ukujongana nokusetyenziswa kwezinto ezisebenza ngokubambisana apho onke amalungu eqela achaze uxanduva. Esi sicwangciso sinokulungiswa ukuba sisetyenziswe kumaqela obungakanani obukhulu (ababhali ababini ukuya kubahlanu) okanye nakweyiphi indawo yomxholo.
Naliphina inkqubo yokubhala ebambisanayo kufuneka ifundiswe kubafundi kwaye iqhutywe ngamaxesha amaninzi ngonyaka ngenjongo yokuba abafundi bakwazi ukulawula inkqubo yokubhala iqela ngokwabo.
Njengokuba kukho nawuphi na umsebenzi wokubhaliweyo, umntu okanye iqela, utitshala makacacise ngokucacileyo injongo yesabelo (ukwazisa, ukucacisa, ukunyanzelisa ...) Injongo yokubhala iya kuthetha ukuchonga abaphulaphuli abajoliswe kuyo. Ukubonelela abafundi irubrikhi yokubhala ngokubambisana kwangaphambili kuya kubanceda kangcono ukuba baqonde ukukulindela komsebenzi.
Xa injongo kunye nabaphulaphuli bebekiwe, ukuyila nokufezekisa iphepha lokubhala elibambisanayo okanye incoko ayifani ngokuhlukileyo kunokulandela amanyathelo amahlanu enkqubo yokubhala:
Inkqubo yokubhala kwangaphambili
Abafundi ekuhlaziya iqela isabelo kunye neemfuno zemveliso yokugqibela okanye iphepha;
Abafundi kweli qela bacacisa kwaye babelane ngemibono;
Abafundi kweli qela baqulunqa isilwethi okanye sebenzisa isingci:
Le yimizamo yokuqala ekuphuhliseni isikhundla okanye ukuqinisekiswa;
Ngenxa yokuba amanyathelo okuqala enkqubo yokubhala yilapho abalobi beqela bekhokelwa yimibandela abanayo (ukufunda ngokusekelwe kwimibuzo), isicatshulwa esisebenzayo asiyiyo yenkcazo yokugqibela.
Abafundi eklasini banquma ukuba ngubani oza kubhala iindawo ezithile zephepha. Oku kuya kufuna ukuba abafundi basebenzisane, kunokubambisana kuphela. Nasi umehluko:
Xa bebambisana, abafundi basebenzisana kunye kunye nomgomo omnye wabelane;
Xa bebambisana, abafundi baqhuba kunye ngelixa besetyenziselwa iinjongo ezizicingayo.
Abafundi kwiqonga leqela isicwangciso sobambiswano esekelwe kwiimfuno zesabelo (Ex: ukuhlaziywa kwencwadi, ip / con ekhupha iphepha) kwaye uyavumelana nesicwangciso;
Abafundi kweli qela baqaphela ixesha elichazwe ixesha elichaziweyo kwiimfanelo zomntu ngamnye kunye neqela;
Abafundi beqela baqaphela ukuba umsebenzi ungenziwa njani ngokuchanekileyo (eklasini / ngomntu) okanye njenge-inynchronously (online). Ngokusetyenziswa kweefomati zokubhala kwi-intanethi njenge-Google Amadokhumenti, ezi zigqibo zeqela ziya kunceda iqela likwabelana ngokuhlaziywa kunye nolwazi ngempumelelo.
Abafundi kwiqela eliqulunqa indlela isabelo esiya kulawulwa ngayo (Ex: izigaba, izahluko, imihlathi, izihlomelo);
Abafundi kweli qela bachonga indlela kwaye baza kufumana phi izinto ezizithembekileyo kunye nexesha elifanelekileyo (iincwadi, amanqaku, amanqaku epapasho, iividiyo, ii-podcasts, iiwebhsayithi, udliwano-ndlebe okanye uphando olwenziweyo ngokwenza uphando ngesihloko);
Abafundi kweli qela bachonge ngubani oza kufunda nokucwangcisa ulwazi;
Ubungqina bepro / con bufaneleke ngokulinganayo;
Ubungqina kufuneka buchazwe;
Izicatshulwa kufuneka zichongwe;
Abafundi eklasini bahlalutya ubungqina malunga nendlela exhasa ngayo indawo;
Abafundi beqela baqaphela indlela engcono yokufaka ubungqina obongezelelweyo (EX: imifanekiso, iirafu, amatafula kunye namashadi.)
Abafundi ngabanye bahlala bekhumbula ingqalelo indlela okubhalwa ngayo kunye nokubhala komntu ngamnye kuya kufakwa kwiphepha okanye umkhiqizo.
Abafundi babhala ndawonye ngokuchanekileyo (eklasini / ngomntu) okanye njenge-inynchronously (online):
Ukubhala njengeqela lichitha ixesha; la mathuba kufuneka asele ekuqinisekiseni ukuba uxwebhu luququzelelwe ukunika umfundi ingcamango yezwi elihlangeneyo.
Umfundi kwiqela kufuneka aqinisekise ukuba umxholo wephepha okanye umkhiqizo ucacile kwaye umbhalo ubhekisela omnye (okanye kwimeko yompro / con, yonke) umyalezo kubantu abatyebileyo ngaphambi kokuba baxoxe ngeenguqu zokubhala.
Ukuhlaziywa, ukuHlahlela, kunye nokuFunwa koBungqina
Abafundi ekuphononongweni kweqela baqulunqe iinxalenye zexwebhu ngaphambi kokudibanisa kunye noxwebhu olulodwa;
Abafundi beqela bajonga ukuhamba kweengcinga. (Qaphela: Ukufundisa abafundi ukuba basebenzise ukutshintshwa kubaluleke kakhulu ukucofa ngaphezu kweedrafti nganye);
Abafundi kweli qela bahlaziya umxholo kunye nesakhiwo sephepha;
Abafundi kweli qela bahlola iphepha kwaye bahlolisise iifayile, iimpazamo zokupeliswa, iingxaki zokubhala iimpompo, imiba yokufomatha, kunye neepazamo zeprama. (Qaphela: Ukufunda iphepha ngokuvakalayo isicwangciso esihle kakhulu sokuhlela).
Uphando olongezelelweyo ngokuBhala ngokuBambisana
Kungakhathaliseki ukuba ubukhulu beqela okanye indawo yokufundela indawo, abafundi baya kulawula ukubhala kwabo ngokulandela umzekelo wombutho. Oku kufunyenwe kusekelwe kwiziphumo zophando (1990) oluqhutywe nguLisa Ede no-Andrea Lunsford oluye lwaphumela kwincwadi ethi Imibhalo engabonakaliyo / AbaBhali beZinyanisiweyo: Iinjongo zokuBhala ngokuBambisana, ngokwemiSebenzi yabo, kukho iikhompyutheni ezi- . Ezi ndlela zisixhenxe zi:
"iqela liceba kwaye lichaza umsebenzi, ngoko umbhali ngamnye ulungiselela lakhe inxalenye kwaye iqela lihlanganisa iindawo ezithile, kwaye liphinde lihlaziye lonke iphepha njengoko lifunekayo;
"Iqela liceba kwaye lichaze umsebenzi wokubhala, elinye ilungu lilungisa ilungiso, iqela lihlela kwaye liphinde lihlaziye iqulunqo;
"Ilungu elinye leqela liceba kwaye libhale umqulu, iqela liphinde lihlaziye iqulunqo;
"isicwangciso somntu omnye kwaye sibhala isiqulunqo, ngoko omnye okanye ngaphezulu kwamalungu aphinde ahlaziye iqulunqo ngaphandle kokubonisana nabalobi bokuqala;
"iqela liceba kwaye libhale umqulu, omnye okanye ngaphezulu amalungu ahlaziya isilyuli ngaphandle kokubonisana nabalobi bokuqala;
"umntu omnye ubeka imisebenzi, ilungu ngalinye lizalisa umsebenzi ngamnye, umntu omnye uqokelela aze ahlaziye kwakhona loxwebhu;
"enye iyalela, enye ibhala kwaye ihlela."
Ukujongana ne-Downsides ukuya kuBhala ngokuBambisana
Ukuze kuphuculwe ukusebenza komsebenzi obhaliweyo wokubhala, bonke abafundi kwiqela ngalinye kufuneka babe ngabathathi-nxaxheba. Ngoko ke:
Abacebisi kufuneka bajonge inkqubela yeqela ngalinye, banikele ingxelo kwaye bancedise xa kuyimfuneko. Ekuqaleni, le ndlela yokubeka iliso ingaba yidla ixesha elide kuneendlela zokufundisa zemveli, kodwa utitshala angakwazi ukudibanisa namaqela ngokufanelekileyo ngexesha elide kunabanye abafundi. Nangona ukulayishwa kwangaphambili kweso sabelo sokubambisana kuthatha ixesha, inani leemveliso zokugqibela liyancitshiswa kakhulu kangangokuba ixesha lokubala liyancitshiswa.
Iprojekthi yokubhala ebambiseneyo kufuneka yenziwe ngendlela ukuze ukuhlolwa kokugqibela kuthathwe njengebakalayo, kulungile kwaye kuchanekile. Uvavanyo lokugqibela kufuneka luqwalasele ulwazi kunye nokusebenza kwamalungu onke. Ukuqokelela ubunzima kunokwenza ukuba izabelo zeqela zibe nzima kubafundisi. (Jonga i- article grading article)
Abafundi ngezinye izihlandlo bangabhikisana ngokwenza izigqibo kwi-setting setting. Kukho ukongeza uxinzelelo kubafundi ngenxa yeengcamango ezininzi kunye nezindlela zokubhala. Ezi zimele zifakwe kwimveliso yokugqibela ekholisa wonke umntu.
Abafundi abakulungele ukufumana amava okubambisana nehlabathi kunye neyona njongo ebalulekileyo, kwaye inkqubo yokubambisana ingabancedisa ngakumbi ootitshala ukuba bafezekise loo njongo. Uphando luxhasa indlela yokusebenzisana. Nangona indlela yokubambisana ingadinga ixesha elingakumbi kwi-set-up nokubeka iliso, ambalwa amaphepha amaphepha ootitshala abakala kwibhonasi.
"Yehla kwi-Bandwagon!" Amayeza asetyenziswa kwiNyulo
5 I-Novel Setting Maps ye-Classic American Literature
Iintetho eziMkhulu zaseMelika zeeKlasi ezi-7-12
Intetho enkulu yaseMelika: uLou Gehrig uhlala e-Baseball
Ootitshala: STOP! Rethink i-Summer Work Packet!
Izihloko ezihlanu zeJografi
Iinkcukacha zobuxoki malunga nabaphandi baNcedo Bafundise izakhono zoPhando
Indlela Yokufundisa Abafundi Ukuhlola Izabelo Zokufunda
Fundisa i-Id, i-Ego, kunye ne-Superego njenge-Literary Citicism noDkt. Seuss
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiikholeji eziphezulu zase-Ohio
Ukuphakama kweAl Capone noLucky Luciano
Juz '29 yeQuran
Iimviwo ezi-10 eziphezulu zabazali abazenzayo malunga nezikolo ezizimeleyo
Rosh HaShanah Ukubulisa
Iisampula zeeKholeji zokuVumeliswa kweKholeji - uMfundisi wabafundi
5 Amanyathelo okuchonga abantu kwiifoto zentsapho ezindala
UJames Polk Iinkcukacha ezifutshane
Indlela yokubhala iziCwangciso zezifundo eziphumelelayo
Uphononongwa ntoni nguMthetho?
Imfazwe Yehlabathi I / II: USS Arkansas (BB-33)
Umhla wokuzalwa ovuyokileyo kwiiLatin kunye ne-Roman Observances
Amazwe anamaLwandle angamaLwandle amakhulu kunazo zonke
I-Whistling Straits Golf Course
Ipaki yeSizwe yeCanyonlands: Indawo ekhangeleka kwi-Dark Sky
Biography kaShawn Mendes
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseSaint
Iintetho zesiTaliyane zesiLwimi: Alzare
Iingxelo ezilishumi elinesine zeWolrow Wilson
18 Iimpawu ezinobungqina kunye neziqhaqhaqho ezibonakaliswe kwiZoo
Iimoto ezisetyenzisiweyo kunye nee-SUV ziyakhuthaza abathengi bangaphandle